Mandela oo la keenay tuuladiisii - BBC Somali
Mandela oo la keenay tuuladiisii
14 Disembar 2013
Maydka Nelson Mandela.
Nelson Mandela ayaa la keenay bariga Cape iyadoo la diyaarinayo aaskiisa barri. Diyaarad sidda maydkiisa ayaa ka duushay garoon milatari oo u dhow magaalada Pretoria, iyadoo la keentay Qunu Mandela ayaa lagu aasayaa tuuladii uu ka yimid ee Qunu. Sida caadadu tahay wiilka uu awoowaha u yahay Nelson Mandela ayaa la socday diyaarada. Xaaskii Mandela, Graca Mandela iyo xaaskiisii hore Winnie waxay la socdaan diyaarad kale.Kumaanaan kun oo ka tirsan xisbiga ANC ayaa ku qabtay xus ay ku sagootinayaan hogaamiyahooda garoonka.Madaxweynaha Koonfur Afrika Jacob Zuma, ayaa ku tilmaamay Mandela nin hanuuniyay dib u heshiisiin oo cafiyay dadkii xumaanta ku sameeyay.